PSG Iyo Juventus Oo Xiddig Arsenal Ah Ku Tartamaya, Qorshaha PSG Ee Messi & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa | Laacibnet.net
HomeBundesligaPSG Iyo Juventus Oo Xiddig Arsenal Ah Ku Tartamaya, Qorshaha PSG Ee Messi & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
Si kastaba, sidii aan nooga barateen waxa aanu halkan idinkula wadaagaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xanta ahaa iyo hadal haynta suuqa ka jirta ee ay qoreen wargeysyada ugu waaweyn Yurub maanta oo Salaasa ah.
Chelsea ayaa diyaar u ah inay xagaaga soo socda rekoodhka suuqeeda u jabiso Erling Haaland walow heshiiska 20 sano jirkaas kaliya 66 Milyan oo Pound lagu jabin karo sanadka dambe ee 2022. (The Athletic – subscription required)
Paris St-Germain agaasimaheeda ciyaaraha ee Leonardo ayaa sheegay in kooxdu ay wali xiiso u qabto samaynta saxeexa Lionel Messi oo 33 sano jir ah. (Sport)
PSG ayaa filanaysa in toddobaadkan go’aan laga gaadhi doono heshiiska ay ku doonayaan inay lasoo saxeexdaan Delle Ali oo Tottenham ka tirsan. (Mirror)
Agaasimaha farsamada ee AC Milan ee Paolo Maldini ayaa sheegay in heshiiska amaahda ah ee ay Chelsea kaga soo qaadanayaan Fikayo Tomori uu dhaw yahay balse uu wali kala daadan karo. (Sky Sports)
Manchester United 28 sano jirkeeda khadka dhexe ee Jese Lingard oo lala xidhiidhinayo kooxaha kala ah Tottenham, West Ham, Marseille iyo Inter ayaa doonaya inuu kooxda ka tago balse tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaan u ogolayn inuu bishan baxo. (ESPN)
Arsenal ayaa u baahan doonta inay 40 ilaa 50 Milyan oo pound ula tagto Norwich City si ay Emi Buendia uga hesho. (Sky Sports)
AC Milan iyo West Ham United ayaa u dhaqaaqi kara saxeexa daafaca bidix ee Barcelona ee Junior Firpo. (ESPN)
Mustaqbalka Jadon Sancho oo Borussia Dortmun ka tirsan ayaan la filayn in la xaliyo bishan January balse heshiis uu kooxda kaga tago ayaa qabsoomi kara kaliya suuqa xagaaga. (Sky Sports)
Fulham ayaa ku fashilantay dalab lama filaan ah oo ay ku doonaysay weeraryahankeedii hore ee Moussa Dembele kahor intii uusan 24 sano jirkaasi qaab amaah ah ugu wareegin Atletico Madrid. (Football Insider)
Manchester United ayaa dalabaad u heshay da’yarta kooxdeeda ee Dylan Levitt oo khad dhexe ah iyo daafaca dhexe ee Teden Mengi oo ay kooxo dhawr ahi qaab amaah ah ku doonayaan ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka. (Manchester Evening News)
Manchester United ayaa ku kalsoon in 23 sano jirkeeda khadka dhexe ee Donny Van De Beek uu ku guuleysan doono Old Trafford sida uu sheegay goolhayaheedii hore ee Edwin Van Der Saar oo agaasime ciyaareed u ah Ajax oo uu hore VDB uga tirsanaa. (Manchester Evening News)
Aston Villa ayaa wadahadalo meel wanaagsan maraya kooxda Marseille kagala jirta khadka dhexe ee Morgan Sanso. (Fabrizio Romano)
Klaas-Jan Huntelaar ayaa tijaabada caafimaadka u maray kooxdiisii hore ee Schalke 04 oo uu kaga biirayo dhinaca Ajax.
AFC Bournemouth ayaa heshiis mudo kooban ah ka saxeexatay xiddigii hore ee Arsenal ee Jack Wilshere oo mudo koox la’aan ahaa.
PSG iyo Juventus ayaa doonaya saxeexa daafaca midig ee kooxda Arsenal ee Hector Bellerin (Calcio Mercato)
Arsenal ayaa haddaba sii dhigaysa qorshaheeda xagaaga iyagoo bar-tilmaameed ka dhigtay garabka weerar ee kooxda Shakhtar Donestk ee Manor Solomon. (Daily Mail)